Shear: ihe ọ bụ, njirimara na nsonaazụ ya na ụgbọelu | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ihe egwu dị egwu maka ikuku. Ọ bụ ihe gbasara shiee. N’etiti ihe mberede ikuku nke ihu igwe na ọnọdụ gburugburu ebe obibi kpatara, shiba abanye. Naanị ihe na-erughị 10% nke ihe mberede kpatara ihu igwe. N'agbanyeghị nke a, ihe ịtụnanya a bụ ihe nke abụọ na - akpata ịta ụra, na - ebute ihe mberede.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite na nsonaazụ nke shiee.
2 Ọnọdụ nke ọnọdụ nke shiee
3 Ube na ụgbọelu
4 Mgbanwe na akuku
Nke mbụ bụ ịmata ihe shiee. A makwaara ya site na aha ikuku ịkwa osisi ma ọ bụ ihe di iche na ikuku ikuku ma obu uzo di n’etiti uzo abuo n’uwa. Dabere na ma isi okwu abụọ ahụ dị iche iche maka ọnọdụ dị iche iche dị iche iche, ịkwaa ya nwere ike ịdị na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị.
Anyị maara na ọsọ ikuku na-adaberekarị na nrụgide nke ikuku. Uzo nke ikuku na-aga dị ka nrụgide nke ikuku. Ọ bụrụ n ’otu ọnọdụ ikuku ikuku dị ala, ikuku ga-aga ebe ahụ ebe ọ‘ ga-ejupụta ’oghere dị ugbu a na ikuku ọhụrụ. Ifufe shiee nwere ike imetụta ọsọ ụgbọ elu nke ụgbọelu n'oge ọpụpụ na ọdịda na-agbagha. Ekwesiri iburu n'uche na uzo uzo abuo a nke kachasiri ike.
Ifufe gradient nwere ike metụta ntọala ụgbọ elu a. Ọ bụkwa ihe na-achịkwa ihe na-ekpebi ogo oke ifufe. Dabere na ikuku ikuku, ọsọ, na nrụgide nke ikuku, ị nwere ike ịmata oke oke ifufe. Ihe iyi egwu ọzọ bụ ọgba aghara nke a na-ejikọkarị ya na ịkwa osisi. Enwekwara mmetụta na mmepe nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ. Ma ọ bụ na ngbanwe a na ikuku ọsọ na-emetụta ọtụtụ mgbanwe ihu igwe.
Ọnọdụ nke ọnọdụ nke shiee
Ka anyị lee ihe bụ ọnọdụ ikuku kachasị mma nke anyị nwere ike ịchọta na nke a gbasara ihu igwe n'oge ikuku ma ọ bụ naanị na ikuku:
N'ihu na usoro usoro: Enwere ike ihu igwe ikuku dị ịrịba ama mgbe ọdịiche dị n'ofe ihu dị ogo 5 ma ọ bụ karịa. Okwesiri imeghari na ihe ruru iri na ise ma obu karia. N'ihu bu ihe ndi ozo na-eme na uzo ato. N'okwu a, enwere ike ịhụ ịkwa osisi na-eche ihu n'ogologo ọ bụla n'etiti elu na tropopause. Anyị na-echeta na troposphere bụ mpaghara ikuku ebe ihe omimi gbasara ihu igwe na-ewere ọnọdụ.
Ihe mgbochi na-asọpụta: Mgbe ifufe na-efe site n'akụkụ ugwu, enwere ike ịhụ shea kwụ ọtọ na mkpọda. Nke a bụ mgbanwe ikuku na-agba dị ka ikuku na-agbago n’elu ugwu. Dabere na nrụgide nke ikuku na ọsọ nke ikuku na-ebu na mbụ, anyị nwere ike ịhụ mmụba ka ukwuu ma ọ bụ obere.
Etinye ego: Ọ bụrụ na anyị nọ n'abalị doro anya ma dị jụụ, a na-emepụta ntụgharị ihu igwe dị n'akụkụ elu ahụ. Ntughari a na-egosi na ihu igwe dị ala dị ala karịa ụwa na elu na elu. Esemokwu anaghị emetụta ikuku n’elu ya. Mgbanwe ikuku nwere ike ịdị ogo 90 na ntụzi aka wee ruo iri anọ na-agba ọsọ. Enwere ike ịhụ ụfọdụ iyi dị ala n'abalị. Ọtụtụ ọdịiche nwekwara ike ịkpata nsogbu ndị ọzọ na ụgbọelu. Ka anyị ghara ichefu na njupụta bụ ihe dị mkpa na-eduzi ikuku.
Ube na ụgbọelu
Anyị ga-ahụ ihe ga-eme mgbe ihe igwe meteorooroji mere na anyị ga-aga ụgbọelu. Na ileba anya mbu o siri ike ịmata. Eta pụtara na ndị na-anya ụgbọ elu anaghị enwe ya oke mmata ịmata ụdị ọnọdụ ihu igwe ndị a. Na akụkọ ụgbọelu, a na-agwa ndị ọkwọ ụgbọ ala nke ọma banyere ọnọdụ dị n'ụdị ụdị ihe a ka ha wee nwee ike ịkwadebe ma were ezigbo azịza. N’ezie, ọtụtụ ụgbọelu nwere onye na-achọpụta ikwa osisi.
Mgbe ịchọtara mpaghara ebe ikuku na-aga gbanwere kpamkpam n'etiti etiti ma ọ bụ ọdịda, ihe kachasị mma enwere ike ime abụghị ịgbanwe nhazi nke ụgbọ elu ahụ na itinye ike kachasị elu. N'ihe banyere ọdịda, ọ ka mma ịhapụ ọrụ ahụ wee gbagoo tupu ịbanye mpaghara ahụ. N'okwu nke ọ bụla, a ghaghị iburu n'uche na ọ bụ ọnọdụ dị mgbagwoju anya na-edozi, ebe ọ bụ na akwara nwekwara ike igwu egwuregwu ọjọọ.
Ihe kpatara nsogbu a dịgasị iche ma na-emetụta ọnọdụ mpaghara nke ọdụ ụgbọ elu ọ bụla. Okwu nke ala gbara gburugburu bu ihe megidere uzo ma obu ikuku. Dịka ọmụmaatụ, na Canary Islands, a na-emetụta ọdụ ụgbọelu karịa ma ọ bụ obere oge n'ihi enyemaka dị mkpa nke agwaetiti. Ọ bụ ebe a ka anyị hụrụ na ụfọdụ ihe ịtụnanya na - adịkarị maka ụgbọ elu na - efedata na mpaghara ndị a.
Mgbanwe na akuku
Ka anyị were ụgbọ elu na-efe efe na larịị nke dị na mpaghara nke ikuku na-asọda na ụzọ mgbada. N'ihi enweghị ike ya, ụgbọ elu ahụ ga-anọtụ nwa oge na ọsọ mgbe niile n'ihe banyere ụwa. N'oge a niile, ihe dị irè ugbu a n'akụkụ nku ya anọworị na ụzọ ụgbọ elu ya, mana ọ ga-enwerịrị ihe kwụ ọtọ. Mkpụrụ ndụ ahụ ga - enweta ụgwọ na - adịghị mma ma onye na - anya ụgbọelu ga - ejigide ya mgbe oche ga - ada n’okpuru ya.
Mgbe mbido abanye na mgbada, mmetụta ike na-abawanye na ụgbọ elu ahụ na-eweghachi akụkụ ya gbanwere site n'onwe ya. N'ụzọ dị otú a, ha na-aga n'ihu na-achakarị agba, ọ gwụla ma ụzọ ụgbọ elu ọhụrụ na-agụnye ọnụ ọgụgụ nke agbụrụ metụtara ụwa. Nke ahụ bụ, ya na ikuku ikuku na-ada ada ma ọ bụ nwayọọ na-esonyezi akụrụngwa dị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ịkwa osisi na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Shiee